Iindawo Zeholide Eziqeshisayo eUkunda - Kwale County, Kenya | Airbnb
Iindawo zeholide eziqeshisayo eUkunda
Ezona zindlu eziqeshisayo zeholide ezithandwayo eUkunda
Istudiyo esihle, i-Afro Flat ngaphandle kweDiani Beach Road
Iyunithi yam yindawo epholileyo, ezolileyo, apho unokubuyela uze uphumle ngoxa useholide okanye useshishini. Ulwandle ngumgama wokuhamba, kwaye unika umoya opholileyo wolwandle onokuvakala kwisitudiyo. Kukho indawo yokupaka eyaneleyo kwaye iflethi yi-10min drive ukusuka Ukunda airstrip. iziko lokuthenga Diani imalunga 7min drive, sinalo ivenkile enkulu, ATM, ikhemesti, iivenkile zokutyela, iibhari, laundrymat, Curio/Souvenir iivenkile, Salon & iivenkile Kinyozi.
Izinto ezinokusetyenziswa ezithandwayo kwiindawo eziqeshisayo zeholide eUkunda
Ezinye iindawo zeholide eziqeshisayo eUkunda
Malindiiikhilomitha eziyi- 133
Kilifiiikhilomitha eziyi- 94
Mombasa Beachiikhilomitha eziyi- 33
Mtwapaiikhilomitha eziyi- 43
Dianiiikhilomitha eziyi- 3
Zanzibariikhilomitha eziyi- 212
Nairobiiikhilomitha eziyi- 451
Diani Beachiikhilomitha eziyi- 2
Mombasaiikhilomitha eziyi- 29